जातीय विभेद छ त तल्लो जातमै
जनवरी 23, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, सिधेनुन
सिधेनुन र यसको प्रयोग । बर्त बस्दा होस वा जुठो पर्दा सिधेनुनलाई शुद्ध मानिएको छ भने उच्च रक्तचापका बिरामीलाई सिधेनुनले कुनै हानी गर्दैन । यो खबरले अब नुन कम खानेहरूका लागी सिधेनुन खानुस भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
आयोडिनयुक्त नुनको कमी हुनेहरूका लागी आयोडिन नुन ठिक छ तर जसलाई आयोडिन आवश्यक छैन भने यसको अत्यधिक प्रयोगले क्यान्सर हुनसक्ने उत्तर प्रदेशबाट प्रकाशित चिकित्सा पल्लवमा लेखेको छ ।
कुनै पनि नुनको अत्याधिक प्रयोगले क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मुटुको रोग निम्तने खतरा बढेको छ । स्वादको रूपमा लिने नुनले स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई केयर गरौं भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।
स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिन नसक्नाले आज मानिस दिनप्रति दिन रोगको दलदलमा फस्दै गएको अवस्था हाल नेपालमा देखिएको छ । आज जतिपनि रोग नेपालीलाई भएको छ सवै खानपिनको लापरबाहीले गर्दा भएको हाम्रो ठहर छ ।
कम्मर दुख्दा गर्नुपर्ने योग आसनहरू
← विश्वविख्यात ७ वरिष्ठ डाक्टरहरु
रोग किन लाग्छ ? →
स्वास्थ्यको लागि काउली खानुका फाइदाहरु
अप्रील 29, 2019 अप्रील 29, 2019 साइन्स इन्फोटेक 6
डिसेम्बर 20, 2018 डिसेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
कलेजोमा बोसो बढ्नु र यसका लक्षणहरु
जुलाई 6, 2019 जुलाई 6, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
One thought on “सिधेनुन र यसको प्रयोग”
Pingback:नुन : कति गुण कति वैगुण